Andrasana ny fanapahan-kevitry ny fanjakana: 54 ny matin’ny Covid-19 tao anatin’ny herinandro | NewsMada
Miakatra hatrany ny isan’ny olona matin’ny Covid-19. Nidina amin’ny antsasany kosa anefa ny marary vaovao voatily, araka ny antontanisa nivoaka farany. Nampanantena ny haka fanapahan-kevitra ny fanjakana, manoloana izany, aorian’ny anio.
54 ny isan’ny olona lavon’ny valanaretina Covid-19 nanomboka ny 1 janoary ka hatramin’ny 7 janoary lasa teo, araka ny antotanisa ofisialy navoakan’ny tomponandraikitra ny faran’ny herinandro teo. Mitombo hatrany ny isa isaky ny 15 andro ary mitotaly 1 117 ny maty nanomboka ny volana marsa 2020 ka hatramin’ny 7 janoary lasa teo. 236 kosa ny marary anatin’ny fahasarotana ilana fampiasana fitaovana manokana toy ny oxygène sy ny kojakoja miaraka aminy eny amin’ny hopitaly.
Mbola foiben’ny valanaretina Analamanga
1560 ny tranga vaovao manerana ny Nosy ka ny 1106 amin’ireo ato anatin’ny faritra Analamanga avokoa raha 203 kosa ny ao Vakinankaratra. Nidina amin’ny antsasany ny isan’ny tranga vaovao raha mitaha ny tamin’ny herinandron’ny 25 desambra. 10 175 ny fitiliana vita nahazoana ny antontanisan’ny tranga vaovao. Miisa 2293 ireo sitrana soa amantsara tao anatin’ny herinandro.
Nambaran’ny filoha teny Iavoloha ny herinanandro teo fa miankina amin’ny fivoaran’ny Covi-19, aorian’ny 10 janoary (anio) ny fanapahan-kevitra horaisina. “Hitantsika eo aorian’ny fety na miakatra na midina ny taha. Vaovao tsara raha midina izany”, hoy izy. Nanteriny fa antony nanemorana ny fidiran’ny mpianatra ny hanapahana ny rohim-pifandraisan’ny valanaretina izany. “Ho hita eo ny fepetra horaisina. Hita fa midina mihoatra amin’ny tamin’ny herinandro farany teo ny taha”, hoy ihany izy.
Miisa 31 ireo tranga vaovao ao Moramanga
Araka ny antontanisa ofisialy ny 1 hatramin’ny 7 janoary, miisa 31 ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 ao amin’ny faritra Alaotra-Mangoro. Anisan’izany ny ao amin’ny distrikan’i Moramanga. Manoloana izany, miara-miasa ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ireo tomponandraikitra any an-toerana manolotra vahaolana hiarovana sy hitsaboana ny vahoaka amin’ity valanaretina ity.
Toerana roa no natokana handraisana ireo mararin’ny Covid-19 ka ny voalohany ao amin’ny CHRD Moramanga, afaka mandray marary miisa enina. Ao amin’ny “Hopital Annexe” Ambohitranjavidy kosa ny faharoa, afaka mandray olona manodidina ny 46. “Misy ny fanafody sy ny oxygène ary mandeha koa ny “Groupe””, hoy ny talen’ny “UASM” eto anivon’ny ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka no sady “Coach” ho an’ny faritra.